संवृद्ध महासंघ बनाउने मेरो मुख्य एजेन्डा: श्रीजन झा-प्रेस युनियन (भिडियोसहित)
भन्छन–‘महासंघको फोहर सफा गर्नेदेखि आफ्नै भवन पनि बनाउनु छ’
प्रकासित मिति : २०७३ चैत्र ३१, बिहीबार प्रकासित समय : ११:०९
हरपल नेपाल डटकमसँगको कुराकानीमा काठमाडौं शाखाका उपाध्यक्ष श्रीजन झा
पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखामा नयाँ सदस्यता छनोट लगाएत विविध विषयमा कुरा नमिलेपछि लामो समयदेखि विभिन्न पत्रकार संबद्ध संगठनहरुको नामबाट लागेको ताला खुल्यो र महासंघले योग्यता क्रममा परेका केही पत्रकारहरुलाई सदस्यताको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । अहिले खासगरी अलि ठूला भनिएका पत्रकार संगठनहरुले वैशाखमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा आ आफ्नो तर्फबाट अध्यक्ष सहितका मुख्य पदमा आफ्नो प्रचार गर्न सुरु गरेका छन । हरपल नेपाल डटकमले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका पत्रकार नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै वहस कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसै क्रममा बुधबार प्रेस युनियनबाट काठमाडौं शाखा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका श्रीजन झासँग तपाईको उम्मेदवारी किन ? एजेण्डा के छन तपाईका भनेर सोधेका छौ । झा काठमाडौं शाखाको उपाध्यक्ष समेत हुन । प्रस्तुत छ उनीसँको कुराकानी……
१) नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा तपाई पनि चर्चा छ नि ? जीत्ने तयारीमा बेस्त हुनुभएको छ हो ?
लामो समयसम्म पत्रकारीता गरे अनि पत्रकार महासंघको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको कुरा सर्वबिदितै छ । आफ्नो मैले पनि पत्रकारीतामा आफ्नो गन्तब्यलाई क्रियाशील बनाउँने क्रममा आउँदो वैशाखमा हुने काठमाडौं शाखाको निर्वाचनमा प्रेस युनियनबाट मेरो नेतृत्वमा चुनावी टोली तयार भएको छ, यो सत्य हो ।
वास्तवमा हाम्रो काठमाडौं शाखाले आफैमा विशेष महत्व राख्दछ । म महासंघको सदस्य हुँदै अहिलेको उपध्याक्ष हुँदै गर्दाको अवस्थामा आफ्नो चुनावी तयारी सहित पत्रकार महासंघलाई नेतृत्व गर्ने सोचमा पुगेको हुँ । मैले जहिले पनि महासंघलाई दलिय राजनीतिभन्दा पर राखेर चलाउँनु पर्छ भन्दै आएको छु, सकेजति राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो प्रयास गरी रहेको छु । मेरो प्रयास मुलत व्यक्तिगत भलाईका लागि नभएर महासंघलाई फोरहर हुनबाट जोगाउँनका लागि, त्यसको विकास र संवृद्धीको लागि भएको मैले ठानेको छु । समग्र भन्नुपर्दा पत्रकार महासंघको गरिमा बचाउँदै पत्रकार महासंघ हामी सबैको साझाँ हो भन्ने सबैलाई गर्व गराउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । हामी साथीभाईहरुसँग आफ्नो पक्षमा प्रचार पनि गरिरहेका छौ । चाहन्छु ।
२) लामो समयसम्म लागेको ताला खुलेपछि महासंघभित्रको बिवाद एकै पटक जादुँमय ढंगले मिल्यो नि ? त्यो कसरी भो ? अब निर्वाचनको मितिमा त विबाद छैन नि ?
सुरुमा हामीले २०६६ चैत्र १ गते महासंघको दश औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका थियौँ, त्यो तालाबन्दीकै कारणले सम्भब भएन । तपाईले भनेजस्तै पछिल्लो चरणमा महासंघ केन्द्रले महाधिवेशन नगर्ने शाखाले केन्द्रको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने खालको ब्यवहोरा सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलन गर्ने र केही असन्तुष्टि बोकेका सबै साथीहरुले महासंघको गरिमालाई जोगाउँनका लागि केही विषयमा समझदारी सहित सबै तालाहरु खुलेका हुन । वास्तवमा हामी पत्रकारहरु सचेत छौ र एक छौ भन्ने राम्रो संन्देश पनि यसले दिएको छ ।
तर केही ब्यक्ति वा महासंघमा आफ्नो भावनालाई लाद्न खोज्ने प्रवृती पनि हुन सक्छन, त्यस्तै सोच, चिन्तनका र मानसिकताको कारण मूलत कमिकमजोरी सुधारको माग राखेर केही संगठनहरुले आन्दोलन गरेपनि पछिल्लो समयमा सबैले राम्रो अभ्यास गर्नुभएको छ । अब हामीले सबै बाधाँ,ब्यवधानहरुलाई चिरेर महासंघको आगामि यात्रामा सबैसँगै अगाडी बढ्नु पर्दछ । हामीले आगामी वैशाख ८ गते काठमाडौं शाखामा निर्वाचनको मिति पक्का गरेका छौँ । तसर्थ आठ गते भव्यत र सभ्य रुपमा हाम्रो निर्वाचन हुन्छ र महासंघले सक्षम नेतृत्व पाउँछ ।
३) अहिले महासंघले कस्तो खालको नेतृत्वको आवश्यकता छ र त्यसका सम्भावित पात्रहरु प्रतिश्प्रधामा छन देख्नुभएको छ कि छैन ?
मैले महासंघमा सदस्य हुदै अहिले उपाध्याक्षमा काम गरेको तीन बर्ष काम गर्दै गर्दा मैले त्यहाँ जे जस्ता समस्याहरु देखें, जुन विषयमा अहिले त्यसको हल गर्न सकिएन, त्यसैको निराकरणका लागि मेरो उमेदारी हो । महासंघभित्र जति पनि गर्न सकिने कामहरु, त्यसको सम्बृद्धी र गरिमा उच्च राख्नका लागी गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु रहेका छन पहिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिने मैले सोचेको छु । आज भन्दा २४ बर्ष अगाडि हाम्रा अग्रज पत्रकारहरुले जुन सपना देखेका थिए,त्यसलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्ने मेरो प्रण रहेको छ ।
राजधानीमा रहेको महासंघको आफ्नै भवन नभएको हुँदा प्रत्यक बर्ष वैशाख,जेष्ठ,असारमा परिषद् बाट भार खेप्नु पर्ने समस्या छ,यि सबै विषयमा अबको नेतृत्वले हल खोज्नु पर्छ । तसर्थ अहिले हाम्रो शाखाले दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर महासंघलाई साझाँ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, क्रियासिल पत्रकारको नेता, अनि पत्रकारका मुद्धामा राम्रो पहल,नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका पत्रकारहरुको आवश्यकता महसूस गरेको जस्तो लाग्छ, यो महाधिजेशनबाट त्यो नेतृत्व आउँनेछ ।
४) गत चुनावमा पनि विविध खालका एजेन्डाहरु बोकेर महासंघको नेतृत्वमा पुगेका साथीहरुले आफ्नो प्रचार गरे, कसैले भवन बनाउने जस्ता कुरापनि उठाए तर ति सबै कार्यान्वयन नभएका होलान ?
पहिलो कुरा बिगतको मेरो घोषणापत्रमा भवन बनाउने जस्ता कुराहरु कहि पनि थिएनन् । किनभने आफुले गर्न नसकिने अवस्थामा खाक्रो आश्वसन, झुट्टा नारा कदापि सुहाउँदैन । मेरो टिममा आउनु भएका साथिहरुले पनि महासंघको भवन बनाउछु भनेको जस्तो लाग्दैन । पत्रकारीता पेशा र संगठनको हकहितका लागी म यो वा त्यो गर्छु भनेर चुनाव जीत्ने त्यो मापदण्ड हाम्रो होइन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । जितेपछि गरेर देखाउनु राम्रो हो भन्ने मेरो सोच छ ।
अहिले पनि हेर्नुस २०४९ सालमा गठन भएको काठमाडौं शाखाको नीति के छ ? हो म त्यहाँ को उपाध्याक्ष छु, यसकारण म लज्जित पनि छु । कतिपय कामहरु गर्दै जाँदा, कतिपय एङ्गलबाट खुट्टा तान्ने कामहरु हुदाँरहेछन । महासंघभित्रका केही साथीहरुमा रहेको फोहरी चिन्तनहरु पनि हटाउनु आवश्यक छ, र त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि मलाई साथीहरुको साथ,समर्थन रहेको छ । यदि मैले यसपटक जितेर पनि यो महासंघलाई सम्बृद्ध महासंघ बनाएन भने म पदमा बस्नु औचित्य हुदैन ।
५) महासंघलाई कस्ले फोहोरी बनायो ? त्यसको कारण के ? त्यसो भए तपाईले आफ्ना एजेण्डा नै बनाउँनु भएको छैन,एकै पटक कार्यान्वयन गर्ने ?
कहाँ कस्ले के गर्यो भन्नेतिर नजाऔं । हेर्नुस लोकराज जी, सर्बप्रथम महासंघको वैद्यानिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, यो धेरै साथीहरले उठाएको विषय हो । जबसम्म केन्द्रको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदैन तब सम्म हामीले चाहेर पनि त्यो जन्जिरलाई तोड्न सक्दैनौँ । मुख्य समस्या यही छ । अब आउने नेतृत्वले काठमाडौं शाखामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्छ र केन्द्रलाई त्यसका लागि आवश्यक दबाव दिएर यो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
६) यदि तपाईले जितेर महासंघको नेतृत्व पाएको खण्डमा जुन राजनीतिक प्रभावको कारणले फोहोर भएको महासंघलाई सफा गरेर अगाडी जान सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?
स्वभाविक रुपमा सहकार्य, सहमति र संवादबाट महासंघमा रहने सबै साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै महासंघको आवरणको सफाईमा मेरो पहिलो कोसिस हुनेछ । म सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो उम्मेदवारी आजसम्म काठमाडौं शाखाले भोग्दै आएका समस्याहरुको निकासका लागि हो, समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईहरु निश्चित रहनुहोस । मात्र मलाई तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ ।
७) अहिले चुनाव नजिकिदैँ गर्दा प्रचार प्रसारमा खर्च गरेर चुनाव जित्ने लाईनमा छन रे साथीहरु, हो र ?
यो विषयमा म के भन्छु भने, हामी १९ हजार पाँच सयका लागि राज्यसँग लडाई लड्दै छौ, भने महासंघमा चुनाव जित्नका लागि कसरी लाखौ लाख खर्च गर्न सक्छौ ? कसरी खर्च गर्छन म आफै चकित पर्छु ? साथीहरुको त्यो खर्च गरेर मात्र चुनाव जित्न सकीने भ्रम म चिर्न चाहन्छु । एउटा १९ हजार पाँच सयको लागि संघर्ष गर्ने पत्रकारले चुनावमा लाखौ लाख खर्च गर्न खोज्छ भने, उसको नियत स्पष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ । उसले महासंघलाई के गर्न चाहन्छ , हामी जस्तो कलम चलाएर खाने व्यक्तिले पहिले नै ती कुराहरुलाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
७) अब तपाईलाई किन भोट दिने त साथीहरुले ? तपाईले आफ्ना एजेण्डा खुलाउन नचाहेपछि ।
(हाँस्दै…) हेर्नुस् लोकराज जी, तपाईलाई स्पष्टरुपमा भन्दा मेरा ठूला एजेण्डा छैनन् । मैले संबृद्ध महासंघ बनाउने एउटा मुख्य एजेण्डा बनाएको छु । संबृद्ध महासंघ भन्नाले आफ्नो भवन बनाउने र पत्रकारलाई यो हाम्रो साझाँ महासंघ हो भन्ने खालको वातावरण बनाउने कुराहरु मैले समेटेको छु । कुनै पनि पत्रकारले काठमाडौं महासंघ शाखामा आफु आबद्ध भएको कुरा सगौरव भन्न सक्नु पर्छ, कतिपय अवस्थामा पत्रकार महासंघको सदस्य भन्दा हेर्ने मान्छेको दृष्टीकोण नै फरक भएको पनि देखिन्छ, हाम्रोमा कम्तिमा यसको निराकरण हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
८) काठमाडौंमा साना लगानी भएका मिडिया धेरै छन, यस विषयमा कस्तो खालको योजना छ तपाईसँग ?
काठमाडौं शाखाको स्थापना हुदाँ, जुन २४ बर्ष पहिले उदेश्य बनेको थियो त्यसलाई आत्मसात गर्दै विशुद्ध रुपमा जसले आफै सानो लगानी गरी पत्रपत्रिका चलाएका छन, उनीहरुको गरिमा आफैमा मार्मिक छ । यो शाखामा आबद्ध साथीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्दै साना लगानीका पत्रिकालाई जीवन्त राख्नका लागी हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
९) अहिलेसम्म प्रचार गर्दा अब अध्यक्ष म नै हो भन्ने लागेको छ कि छैन ? जीत्ने आधार चाही के ?
मेरो चुनाव जीत्ने आधार भनेको यहाँहरुको सद्भाव र सहकार्य नै हो । म कुनै पनि आर्थिक प्रलोभन तिर जान सक्दैन । म आफै मध्यम वर्गको व्यक्ति हो । मेरो जीत्नुको आधार भनेको सम्बृद्ध महासंघ बनाउनु काममा साथीहरुको मलाई सहयोग हो । म २४ बर्षपछि महासंघमा आउँछु भन्दै गर्दा केही दल विशेषका व्यक्तिलाई आपत्तिको विषय पनि भएको छ । मलाई विभिन्न क्षेत्रबाट केही साथीहरुले उमेदारी दिनु पर्छ, महासंघलाई तिमी जस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ भन्दै गर्दा मैले महासंघमा अध्यक्षको लागी उमेदारी दिने निर्णय गरेको हुँ । र म जीत्छु पनि । मलाई विश्वास छ ।